जागरण बुक हाउस, बागबजारले मार्क्सवादी दर्शनसित सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण आलेखहरूको सङ्कलन दार्शनिक रचनाहरू, मार्क्सदेखि माओसम्म बजारमा ल्याएको छ । अनुवादक हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, लेखिएको यस सङ्कलनमा मार्क्सदेखि माओसम्मका केही महत्त्वपूर्ण रचनाहरू सङ्कलित छन् । एकाध नेपालीमा
कृष्णदास श्रेष्ठ मानिसले जीवनमा कस्तो उद्देश्य लिनुपर्छ ? संसारमा जन्म लिएर मानिसले गर्नुपर्ने काम के हो ? उसले आफूले पाएको जीवनलाई कसरी बिताउनुपर्छ ? उसको जीवनको सार्थकता केमा रहेको हुन्छ ? यी यस्ता प्रश्नहरू हुन्,
आफ्नो विश्वदृष्टिकोणलाई पुनर्ताजगी गर्ने प्रश्न कम्युनिस्टहरूका लागि पार्टीमा वैचारिक हिसाबले पूराका पूरा लागिपर्ने प्रश्न हो । अध्यक्ष माओले हामीलाई सिकाउनु भएको छः “संसार बदल्नका निम्ति सर्बहारा वर्ग र क्रान्तिकारी जनताले गर्ने सङ्घर्ष यी कामहरू पूरा